गगन थापाको वलि लाई चेतावनि के भने तेस्तो ? — Imandarmedia.com
काठमाडौँ। कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओली सरकारले संसद्,अदालत सबै क्षेत्रलाई पन्छाएर अगाडि बढ्दा बालुवाटारबाट बाहिरिनुपरेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद थापाले भने,’बाहिर सिंहजस्तो गर्जने भित्र लम्पसार पर्ने, यस्तैयस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दली पुगेको छ अघिल्लो सरकार। थापाले संसद् र सरकारको नयाँ अध्याय सुरु भएको पनि बताए ।’पुन:स्थापित संसद्ले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। यो अध्यायको सुखान्तको लागि सरकार र संसद्सँग जनताका अपेक्षा छन् उनले भने।
अघिल्लो सरकारले गरेका गल्ती दोहोर्‍याउने छुट वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई नभएको पनि थापाले बताए। संसद्लाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने,जनताको दुहाइ दिने,’ उनले भने, नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै कुरा पनि गर्ने छुट छैन। यस्तो हुन नदिन संसद्ले पनि संकल्प गर्नुपर्ने छ। संसद्लाई न बेवास्ता गर्न दिइनेछ न त कामविहीन बनाउने! न त मनोमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइनेछ न त छल्न।
यो संसद् सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसद् र सांसदको प्रश्नसँग संसद्को निगरानीसँग डराउने हो। अहले प्रधानमन्त्रीको मात्रै परीक्षा नभएर सभामुख र सांसद्हरूको पनि सुरु भएको थापाले बताए। जनतामा संविधान र संसद्प्रति गुमेको विश्वास पनि पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
काठमाडौमा धेरै राम्रा बसहरु छन्।